Aqoon kororsi loo furay shaqaale ka tirsan xafiiska xisaabiyaha guud ee Qaranka “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Aqoon kororsigaan oo mudo labo maalin ah socon doona ayaa waxaa maanta loo furay Xisaabiyaasha idman ee xafiiska Xisaabiyaha Guud ee Qaranka uga wakiilka ah xafiisyada Hay’adaha Dowladda, waxaana furay aqoon kororsigaan Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya, iyadoo uu goob joog ka ahaa Xisaabiyaha Guud ee Qaranka.
Siminaarka ayaa lagu baran doonaa Ilaalinta Hantida Qaranka iyo sidii ay shaqaalaha u xilsaaran Xisaabaadka ay ugu adkaan lahaayeen Howsha loo xilsaaray Mas’uuliyiinta ka qayb galay Furitaankiisa ayaana la dar daarmay Shaqaalaha.
Xisaabiyaha Guud ee Qaranka Mudane Axmed Yuusuf Muumin ayaa waxaa uu kula dar daarmay in ay xajiyaan howsha loo idmaday, ayna ku dadaalaan sidii musuq maasuqa looga ilaalin lahaa Hay’adaha Dowladda, isla markaana ay Dalka u horseedaan Nidaamka Wanaagsan.
Wasiir Ku-xigeeenka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Soomaliya Maxamuud Xayir Ibraahim oo si rasmi ah ugu dhawaaqay in aqoon kororsigaasi uu u furan yahay ayaa waxaa uu ku bogaadiyay shaqaalaha loo qabtay in ay ka faa’iideestaan, isla markaana ay noqdaan kuwo ugu adeeega Bulshada Cilmiga ay barteen, ayna sii wadi doonaan qabashada siminaarada nuucaan oo kale ah.
Aqoon kororsigaan maanta magaalada Muqdisho uga furmay Shaqaalaha Xafiiska Xisaabiyaha Guud ee Qaranka qaybtooda Xisaabaadka oo Xafiiskaasi uu qabtay ayaa waxaa uu uga duwan yahay kuwii hore in Dalka lagu qabanayo, isla markaana casharada lagu qaadanayo ay bixinayaan Macalimiin Soomaali ah oo qubaro ku ah Hanaanka Maaliyadda ee dalka.